नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अत्यन्त लोकप्रिय छ काठ क्षेत्रमा काठे खैजडु भजन !
अत्यन्त लोकप्रिय छ काठ क्षेत्रमा काठे खैजडु भजन !
काठे खैजडु भजन : काठमाडौं र यसको आसपासका केही जिल्लामा गाइने भएकोले यसलाई काठे भजन पनि भनिन्छ । यो भजन अत्यन्त लोकप्रिय छ काठ क्षेत्रमा । धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, गोरखा, काठमाडौं, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोकमा यसको बिशेष महत्व छ । ठाउँं अनुसार फरक नाम र प्रस्तुती शैलीमा पनि केही फरक पन हरु मैले देखेको छु यसमा । म नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम निर्माता निर्देशक र संचालक हुँदा २०५४ सालमा टेलिभिजन ईतिहास मै पहिलो पटक यस्तै काठे भजन टोलीलाई सिंहदरबार स्टुडियोमै मगाएर नेपाल टेलिभिजनबाट छायाँकन गरी प्रशारण गरेको थिएँ । त्यसबेला पनि कम वाहावाही भएको थिएन । आज यो क्लिपले पुरानो सम्झना दिलायो । मलाई त अती मन पर्छ यो भजन पनि । तपाईंलाई नि ? - रामप्रसाद खनाल
हाम्राे गाेररखा तिर पुजामा यस्तै भजन गाउछन् रमाईलाे लाग्छ।विशेष त नारायण पुजा मा
Posted by गाेररखालि मन Gorkgali maan on Sunday, March 13, 2016
Posted by www.Nepalmother.com at 9:58 PM